7 Caado oo lagu Yaqaanno Hoggaamiyaha Fiican - Daryeel Magazine
7 Caado oo lagu Yaqaanno Hoggaamiyaha Fiican
Haddaba caadooyinkaas uu qoragu soo helay oo aynu Af Soomaali usoo rognay ayaa u ku bilaabay; Waxa aad doonaysaa in aad noqoto hoggaamiye soo jiitada dadka tayada leh, furaha aad taas ku gaadhi kartaana waa in aad adigu marka hore noqoto shakhsiyad tayo leh. Hoggaamintu waa awoodda qof aad u soo jeedin/jiidi karto hibooyinka, xirfadaha iyo fursadaha aad adigu bixinayso. Hoggaamintu waa caqabad ka mid ah caqabadaha nolosha ee ka gudbistoodu juhdiga iyo kartida u baahan tahay.
7 Caado Oo Kor U Qaada Awooda Maskaxda 10 Caado Oo Qofka Joogteeya Ka Caawiya Inuu Kasbado Qalbiyada Dadka Ku Xeeran & Bulshada Toddobada Caado ee ay Leeyihiin Dadka Waxtarka leh (The Seven Habits of Highly Effective People) Sidee Caado Loo Dhigtaa Wax Akhrinta? Sidee Se La isku Jeclaysiin Karaa?
Talooyin kooban oo kuu Iftiiminaya Nolosha
U fakir si fog U hadal si degan U soco si tartiib ah U jeclow …